टाउको काटेको १८ महिनासम्म कसरी बाँच्यो यो कुखुरो ! | Nepal Ghatana
टाउको काटेको १८ महिनासम्म कसरी बाँच्यो यो कुखुरो !
प्रकाशित : १६ माघ २०७६, बिहीबार २०:५६
के टाउको काटेपछि कुनै प्राणी बाँच्न सक्छ ? मानिस हो वा कुनै जनावर हरेकको मृत्यु निश्चित छ । तर के शिर शरीरबाट छुट्टिएपछि पनि कोहि मानिस वा जनावर बाँच्न सक्छ ? तपाईं भन्नुहुन्छ, बिलकुल बाँच्दैन । तर, आजभन्दा ७२ वर्षपहिले अमेरिकामा यस्तै अचम्मको घटना भएको थियो । यहाँ एउटा कुखुरा टाउको काटेको १८ महिनासम्म पनि जीवितै थियो ।
अमेरिकामा ७० वर्षअघि एक किसानले एउटा कुखुराको टाउको काटिदिए । तर, टाउको काटिएको त्यो कुखुरो तत्काल मरेन, १८ महिनासम्म बाँचिरह्यो ।
चकित बनाउने यो घटनापछि यो कुखुरो ‘मिराकल माइक’ नामबाट विश्वचर्चित बन्यो । यो टाउको काटिएको कुखुरो यति लामो समयसम्म कसरी बाँच्न सक्यो ? यसका बारेमा हामी तपाईंलाई बताउँदैछौँ ।
१९४५ को १० डिसेम्बरमा कोलोराडोको फ्रुटा बस्ने किसान लायड ओल्सेनले आफ्नी पत्नी क्लारासँगै कुखुरा काट्दै थिए । उनीहरूले कैयौं कुखुरा–कुखुरी काटे । यस क्रममा लायडले साढे पाँच महिनाको एउटा कुखरा काटे । कुखुराको नाम थियो माइक । तर, उनलाई यस कुराले अचम्ममा पा(यो कि कुखुरा मरेन, बरु टाउको बिना नै हिँड्न थाल्यो ।
त्यो दिन करिब ४० देखि ५० कुखुरा काटिसकेपछि एउटा टाउको काटिएको कुखुरो भने मरेन । ओल्सेन र क्लाराका नाति ट्रोय वाटर्स भन्छन्, ‘जब आफ्नो काम सकेर उहाँहरु मासु उठाउन लाग्नु भएको थियो, त्यहाँ एउटा टाउकोबिना पनि बाँचिरहेको एउटा कुखुरो हिँडिरहेको थियो ।’
बालककालमा वाटर्स आफ्ना जिजुबाजेबाट यो सत्यकथा सुनेका थिए । आजकाल फ्रुटामा प्रत्येक वर्ष हेडलेस चिकेन महोत्सव मनाइन्छ । यसको सुरुवात १९९९ मा भएको थियो । एजेन्सी